O Kwesịrị Inwe Azụmaahịa Gị Na Pinterest? | Martech Zone
Tuesday, August 6, 2013 Satọde, Febụwarị 4, 2017 Douglas Karr
Osisi mkpebi a sitere na Mbugharị Na-emepụta Blog bụ nnukwu ngwaọrụ maka azụmaahịa iji kpebie ma ha nwere akụ ma ọ bụ na ha enweghị ike itinye oge na ume iji wuo ụlọ Pinterest atụmatụ. Ọ bụ ihe ọmụma mara mma ma dị oke mkpa. Ọ bụrụ na azụmahịa gị kpebiri na ị gaghị azụlite atụmatụ Pinterest nke ya, agbanyeghị, ọ pụtaghị na ị nweghị ike ịgbagha azụ na bọọdụ ndị ọzọ! Offọdụ ndị ahịa anyị na-akwado ma na-arụ ọrụ na ndị ọrụ nchịkwa Pinterest na-aga nke ọma ịkekọrịta ozi yana ọ na-arụ ọrụ dị egwu.
Dị ka ebe ọ bụla na-elekọta mmadụ mgbasa ozi, ọ dị mkpa ịkụziri onwe gị n'elu ikpo okwu, ịmụ ihe gụnyere ịbụ onye otu na-arụsi ọrụ ike yana oge ole ọ ga-ewe iji debe profaịlụ gị. Ọ bụghị azụmaahịa niile dị mma maka Pinterest. Needkwesịrị ịchọpụta ma onyinye gị na ike gị dakọtara maka saịtị ahụ wee wuo atụmatụ siri ike tupu ị wụa elu ahụ. Banye na saịtị mgbasa ozi ọ bụla na-ewe oge, mgbalị na, n'ihe banyere Pinterest, ihe osise dị egwu na ọdịnaya dị ukwuu. Yabụ, azụmahịa gị ọ dịla njikere ime nkwa ahụ?
Mbugharị na-emepụta blọọgụ jụrụ ma kọwaa azịza ajụjụ anọ dị mkpa mgbe ị na-ekpebi ma azụmahịa gị kwesịrị itinye ego na ọnụnọ Pinterest?
Nwere ike ịnọ na-arụsi ọrụ ike na Pinterest?
Have nwere onyonyo na-adọrọ mmasị nke anya, ka ị nwere ike ịmepụta ya?
Ndị na-ege gị ntị na-eji Pinterest?
You nwere ihe ndị ọzọ ịkekọrịta karịa naanị ihe ị na-eme?
Ọ bụrụ n’ikpebie ịga n’ihu, aga m akwado gị Karen Lelandakwụkwọ Ultimate Guide to Pinterest maka Business. Karen zitere anyị otu - mana - nke ahụ bụ njikọ njikọ anyị.
Tags: PinterestPinterest ahịaatụmatụ pinterest
Aug 6, 2013 na 10: 46 AM
Daalụ nke ukwuu maka ịgụ akwụkwọ ozi anyị "Kwesịrị ka azụmahịa gị dị na Pinterest" na ịkekọrịta ozi ndị ahụ na ndị na - agụ akwụkwọ gị.
Aug 16, 2013 na 10: 37 AM
Ndewo. Kedu otu m ga - esi tinye atụmatụ na ihe na - akpali akpali na Pinterest ma ọ bụrụ na enweghị m oge / nka eserese iji mepụta infographcs?
Aug 16, 2013 na 11: 47 AM
Infographics bụ naanị obere akụkụ nke ewu ewu Pinterest…. foto n'ezie kwụpụta karịa ihe ọ bụla. Bido iji saịtị dị ka Foto nkwụnye ego iji chọta ụfọdụ nnukwu eserese dị ọnụ ala - http://www.depositphotos.com (onye nkwado anyị) - wee kpuchie ndụmọdụ gị ma ọ bụ ihe na-akpali akpali maka ebe dị mma!
Aug 17, 2013 na 8: 12 AM
Ka m gbabeghị ndị na-eso ụzọ Pinterest ọ bụla n’ime ndị ahịa (dịka m matara) Achọghị m itinye ego na nke a. Mana m ga-anara ndụmọdụ a. Daalụ.
Aug 17, 2013 na 9: 28 AM
N'ezie, ọ ga-adị mma ịnwe njikọ ahụ kpọmkwem na ntụgharị. Mgbe ụfọdụ, omume ndị a bụ maka ịmepụta na ikike, ọ bụ ezie. A na - ahụ ọtụtụ ndị na - eso ụzọ ya na Pinterest dị ka ndị isi ụlọ ọrụ na akụ tụkwasịrị obi - ihe kwesiri iburu n’uche. Obi ụtọ Pinning! 🙂